Ny firenena UNWTO dia mila famonjena ary Saudi Arabia Saodita dia mamaly amina miliara maro
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny firenena UNWTO dia mila famonjena ary Saudi Arabia Saodita dia mamaly amina miliara maro
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Antso vonjy maika ho an'ny fizahan-tany
911, inona ny vonjy taitra? Arabia Saodita dia mamaly ny krizy momba ny fizahantany manerantany miaraka amina miliara dolara amina miliara maro. Firenena iray no manao mihoatra ny resaka, mandany vola matotra izy hanavotana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany - ary tsy asa fitoriana voalohany fotsiny izany.
“Mamorona tantara isika anio!” Ity ny tatitra momba ny kintana mamirapiratra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany eTurboNews navoaka tamin'ny 6 Oktobra tamin'ny taon-dasa.
Ilay kintana no vehivavy nanan-kery indrindra tamin'ny fizahan-tany tamin'izany fotoana izany, Gloria Guevara. Tamin'izany fotoana izany dia izy no CEO an'ny World Travel and Tourism Council (WTTC). Tsy fantany akory hoe ohatrinona ny mpanetsiketsika sy mpampihorohoro an'ity orinasa ity amin'ny sehatra iray izay mbola tsy hitan'izao tontolo izao fa mety ho lasa androany.
Androany dia mivondrona amin'ny toerana iray ny Ivotoeran'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahantany: Riyadh, Saudi Arabia. Izany dia mety hampisy ny hetsika voalohany nataon'ny UNWTO (World Tourism Organization) namindra ny foibeny avy any Espana ka hatrany Saudi Arabia.
Ny ho avy sy ny fanarenana ny iray amin'ireo indostria lehibe indrindra manerantany dia mety ho eo am-pelatanan'ny firenena malala-tanana, ny Fanjakana Saudi Arabia.
Ny mpitondra manana vina 2030 ao ambadik'izany rehetra izany, raha mahomby, dia ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Saudi Arabia, Hon. Ahmed Al-Khateeb. Ilay vehivavy ao ambadiky ny fanavaozana ny fizahan-tany manerantany dia mety ho CEO taloha an'ny WTTC, Gloria Guevara avy any Mexico, izay miasa amin'ny maha mpanolotsaina ambony an'io minisitra io ihany, Ahmed Al-Khateeb.
Ny G20 dia mety ho ilay andro nandraisan'i Gloria Guevara tolotra asa azy, tsy azony nolavina. Ny antony tsy azony nolavina dia mety tsy ny karama ara-pahasalamana azon'ny firenena Saudi Arabia ihany fa ny tsy fitovizany amin'ny famerenana indray ny dia sy fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao.
Raha ny zava-misy dia mandany vola hatrany amin'ny 500 Miliara dolara amerikana i Saudi Arabia hananganana ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany na amin'ny fireneny ihany, fa amin'ny fanampiana sy fampiasam-bola amin'ny hafa.
Na dia maina aza ny vola any amin'ny ankamaroan'ny firenena hametrahana ity indostria ity, Saudi Arabia manan-karena dia mahita ny fampiasam-bolany amin'ny fizahantany tsy vitan'ny fandresena / fandresena fa fandraisana anjara amin'izao tontolo izao.
Tamin'ny Mey 2021, WTTC teo ambany fitarihan'i Gloria Guevara dia nahomby tamin'ny fihaonambe voalohany manerantany ho an'ny fizahan-tany izay nivondrona tao Cancun, Mexico.
Ny tanjony amin'ny naha Tale jeneralin'ny WTTC azy, ny fikambanana manana orinasa lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ho mpikambana, dia ny hanavotra ny sehatra tsy miankina. Guevara dia nitady fandrindrana iraisampirenena. Nisy valiny avy tany Saudi Arabia nofonosina tamin'ny fanasana hanatrika ny G20. Ity no fotoana voalohany nanasana ireo mpandray anjara tsy miankina.
Io no ilain'ny indostria tsy miankina, fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ireo afaka manatsara.
Ny fihaonana an-tampon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany voalohany hatramin'ny nitrangan'ny COVID-19 dia nitranga. Ny toeram-pialantsasatra dia ny tanàna fialantsasatra Cancun any Mexico. Gloria Guevara mpiavonavona, izay nanana ny toeran'ny Sekretera ny fizahan-tany ho an'i Mexico nanomboka ny 10 martsa 2010 hatramin'ny 30 novambra 2012, dia namarana ity fihaonana an-tampon'ny serasera ity ary manantena ny tontolon'ny fizahantany.
Izay tsy tonga tany Mexico, dia ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili.
Tsy eo koa i Zurab any Arabia Saodita. Raha ny fijoroany ofisialy dia ny tsy fananany olana amin'ny firenena nampiantranoin'ny UNWTO Espana, efa nanokatra biraom-paritra ao Arabia Saodita kosa ny UNWTO.
Araka ny fampitam-baovao Espaniola, ny diplaomaty any Espana sy Saudi Arabia dia sahirana be tao ambadiky ny sehatra.
Betsaka ny mpikambana ao amin'ny UNWTO, indrindra ireo kaominin'ny mpikambana UNWTO izay tsy mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka malaza ao amin'ny maso ivohoan'ny UN dia mahatsiaro tena ho nilaozan'ny UNWTO hatrizay nitondran'i Zurab. Ny UNWTO dia tsy manana ny olona, ​​ny vola ary ny loharanon-karena hametraka fahasamihafana lehibe ho an'ireo mpikarama mandoa. Matetika ny mpikambana dia mahatsiaro fa tsy hoe nilaozana fotsiny fa feno savoka. Tsy mora ny mambra ao amin'ny UNWTO, indrindra rehefa mandalo krizy ratsy indrindra ny indostria.
Mety hifarana izany rehetra izany raha toa ka nafindra tany Arabia Saodita ny UNWTO HQ, ary voatery hiasa miaraka amin'ireo fikambanana hafa, toa ny WTTC. Efa eo amin'ny rindrina ny soratra. Samy nanokatra birao isam-paritra ao Riyadh na UNWTO na WTTC. Izany dia nambara tamin'ny G20. Saudi Arabia Saodita vonona hanavotra ary hiverinamandefa fizahan-tany. Fikambanana hafa no eo am-panaovana izany, betsaka ny mieritreritra ny hanana tongotra any Arabia Saodita.
Ho an'ny besinimaro, nangina i Espana hatreto, fa raha ny loharanom-baovao marim-pototra ao Madrid dia tezitra i Espana. Rehefa nifandray tamin'i eTurboNews, tsy namaly izany ny minisiteran'ny fizahantany any Madrid.
Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana any Madrid dia nanolotra fanavaozana efa ela ny birao foibe UNWTO ny tompon'andraikitra any Espana mba hanonerana ireo lesoka amin'ny maha mpampiantrano maharitra azy.
Na izany aza mety ho tara loatra, satria nisy firenena nandondona ny varavaran'ny Saudi Arabia hanohana ny famindrana ny UNWTO HQ mankany amin'ny Fanjakana.
Mangetaheta famatsiam-bola sy famatsiam-bola ny firenena rehetra raha ny fizahantany no resahina, ary efa nanaiky ny antso vonjy maika i Saudi Arabia.
Ilay kintana nahazo loka tsy azo iadian-kevitra tao amin'ny Vovonana WTTC tany Cancun dia tsy isalasalana fa minisitry ny fizahantany avy any Arabia Saodita. Solontena maro no nilaza izany eTurboNews ny antony lehibe nahatongavan'izy ireo hanatrika ny fihaonana an-tampony dia ny fihaonana tamin'ny delegasiona Saudi Arabia. Vola niresaka tao Cancun ary miresaka izao.
Nahazo valisoa sy fankatoavana tany Cancun ny Minisitra avy any Arabia Saodita rehefa nanokatra varavarana ho an'ny zavatra hitantsika androany ny CEO WTTC, Gloria Guevara.
Betsaka ny zavatra tokony hatao, tity misy tsy rariny sy fanamby marobe eTurboNews notaterina tamin'ny tampon'isa.
Hisy rahampitso vaovao ho an'ny fizahan-tany mialoha eTurboNews mpitory Juergen Steinmetz iray volana lasa izay. Rahampitso vaovao ity na ny sasany milaza fa efa nanomboka ny ara-dalàna vaovao. Hita fa mipoitra ho mpandinika sy mpitarika mazava i Arabia Saodita.
Betsaka ny mpandaha-teny eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Anisan'izany ny CEO, minisitra ary ny lohan'ny fikambanana. Ny firenena rehetra dia manana olana iraisana: ny olana dia tsy misy vahaolana, tsy misy vola hiresahana vahaolana misy akory. Tsy misy mahalala manavotra ny dia sy fizahan-tany ary ireo mpiaramiasa an-tapitrisany miasa.
Miaraka amin'ny namana any Riyadh, mety ho tanteraka ny nofinofy. Mety ho lafo izy ireo, saingy misy ny vahaolana, ary i Saudi Arabia dia namaly ny antso 911 (112) ho namana sy firenena toa miraharaha an'ity indostria ity, ireo olona miasa amin'ity sehatra ity, ary ireo firenena hafa ao anatin'ny tarehin-javatra mahatsiravina. .
Rehefa dinihina tokoa, na dia tsy vaovao ao Arabia Saodita aza ny fizahan-tany, dia vaovao ny fanokafana ny fizahan-tany any Andrefana ho an'ilay Fanjakana, ary ny fanampiana ny olona eran'izao tontolo izao dia mety ho olana ara-kolontsaina, nefa koa fotoana mety ho an'ny orinasa amin'ny fotoana maharitra ho an'ny fanjakana.
Hon. Edmund Bartlett sy HE Ahmed Al Khateeb hihaona amin'ny fihaonana an-tampon'ny fizahantany afrikanina
Aiza isika no mijoro amin'izao fotoana izao?
Raha mijery ny ambaratonga minisitra dia minisitra vitsivitsy ihany no manandrana manatsara. Anisan'izany i Hon. Edmund Bartlett avy any Jamaika.
Bartlett sy Al-Khateeb nanao sonia antontan-taratasy intend tato ho ato, samy manao satroka Bob Marley. Ny fifantohan-tsofina nataon'i Bartlett teo amin'ny sehatra iraisampirenena dia nanova an'i Arabia Saodita.
Ny G20 dia mety ho ilay andro nandraisan'i Gloria Guevara asa tany Saudi Arabia ihany koa, tsy azony nolavina. Io ihany koa ny hetsika raha nampanantena fanohanana manerantany an'arivony tapitrisa Dolara ho an'ny sehatra i Arabia Saodita- ary manatanteraka ny fampanantenany.
Ny hevitry ny filohan'ny Network Network Network:
Juergen Steinmetz, ny filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary mpampiantrano ny fanarenana ny dia hoy ny fifanakalozan-kevitra:
"Mila fanampiana ny fizahantany manerantany ary mamaly izany i Saudi Arabia. "
Steinmetz, izay mpanonta ny eTurboNews nanampy hoe: “Nanomboka mavitrika be ny WTN tato ho ato Vondrona mahaliana an'i Saudi Arabia eo ambany fitarihan'ny Andriamatoa Andriamatoa Dr. Abdulaziz Bin Nasser Al-Saud.
”Tsy tena hoe hiseho hanome ny herin'ny fizahan-tany amin'ny firenena iray. Ny fiaraha-miasa amin'ireo mpankafy azy fa tsy ny mpanaraka sy ny mpandaha-teny fotsiny. Arabia Saodita dia mpanafika ary naneho fahaiza-mitarika bebe kokoa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandritra io krizy io noho ny ankamaroan'ny firenena hafa mitambatra.
“Mametraka ny volany any ambadiky ny fampanantenany i Saudi Arabia. Tsy mahita zavatra tsy mety eto aho. Ny fizahantany dia hijanona ho indostrian'ny hetsika isam-paritra maro. Rehefa dinihina tokoa, mazàna indostrialy feno fitiavan-tena izay ifaninanan'ny toerana kendrena.
“Ny fananana ivon-toerana fizahan-tany amin'ny toerana iray dia hevitra tsara. Raha manam-bola hampandeha azy ny tompon'ity foibe manerantany ity dia toa fandresena ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany izany.
“Raha manana ivon-toerana maneran-tany ho an'ny fizahantany dia tsy midika hoe mamorona firehan-kevitra manerantany na governemanta manerantany ho fizahan-tany ity tontolo ity. Tsy misy ifandraisany amin'ny firehan-kevitry ny firenena politika mpampiantrano izany. Ny firehan-kevitry ny firenena iray dia tsy hanjakazaka velively amin'ny fizahan-tany manerantany. Ny Firenena Mikambana ohatra dia tsy masoivohon'i Etazonia, na dia any Etazonia aza izy io. Ny mifanohitra amin'izay no izy. Amin'ny fampiarahana izao tontolo izao ny firenena mpampiantrano dia afaka mianatra, mandray ary manokatra hevitra sy kolontsaina vaovao.
“Ny fananana ny foiben'ny fizahan-tany amin'ny toerana iray dia tsy hampiova ny fomba fahitan'ny fizahan-tany sy ny fiasa amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Tontolo kely iray rahateo, ary i Zoom dia naneho izany amintsika rehetra.
“Tokony hidera an'i Arabia Saodita isika tamin'ny famaliana antso 911 maro be. Tonga mpandray andraikitra voalohany amin'ny indostria eto amintsika ny firenena ary manana loharanom-pahalalana fanampiana. Arabia Saodita hatreto dia namaly tamim-pahalalahana sy tamim-pitsikiana. ”
Jane Folsom hoy:
12 Aogositra 2021 amin'ny 05:53
Miala tsiny Juergen, tsy taitra na resy lahatra aho fa hevitra hendry ity. Fa maninona no voafihina i Saudi Arabia raha mbola tsy manome valiny ara-dalàna amin'ny famonoana olona sy fanakorontanana mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Washington Post..Jamal Khashoggie? Ary ahoana ny amin'ny fikasana hanapotika ireo ivon-toeran'ny varotra manerantany any NYC vao 20 taona lasa izay tany amin'ny fanjakana… ary ahoana ny amin'ny tsy fanajana ara-kolontsaina ny zon'ny vehivavy?
Tsotra noho ny fananan'ny firenena vola iray-dia mitovy amin'ny hatsaram-po izany? Manam-bola be koa i Sina-maninona no tsy ampiasain'ny mpitondra izy ireo?